Cerny potok Krkonose Lysa awa - PetrPikora.com
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe dị ka ụbọchị
PetrPikora.com on July 15, 2019
Lysá hora (German Kahleberg) bụ ọnụ ọgụgụ dị elu nke dị na ógbè Bohemia, na Giant Mountains. Elu ugwu ahụ bụ 1344 m Rokytnice isi na elu nke oche ahụ ruo elu nke 1310 m, ebe ebe elu ya dị. Ụgbọ ala ụgbọ ala dị na oyi. Site n'ichepụta ọdịiche dị mma, Lysá Hora na ugwu nke Krkonoše Ugwu pụkwara ịhụ na Prague si na 120 kilomita.
Lysá hora dịka ugwu 4 n'ebe ugwu nke oge oyi Rokytnice. Ọ bụ ugwu na-ejikọta ọnụ nke nwere ọnụ elu dị elu nke dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ n'etiti Plešivec na ugwu Kotel nke dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ. A na-ekpuchi greentex, nke ejiri ihe atụ geodetic, kpuchie ya na osisi ahịhịa nke nwere olulu oge, ebe ubi ahịhịa na ahịhịa na-eto eto na-agbasa. Osisi na-eto eto na-eto eto n'obere ala.
N'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ dịghị akara njem nlegharị anya dị n'elu ugwu ma dị na mpaghara mbụ nke KRNAP, a na-egbochi ohere. N'okpuru ebe a, ị nwere ike ịbanye na oyi site na cableway, nke ọdụ ụgbọ elu kachasị elu bụ 200 mita n'ebe ọwụwa anyanwụ. Ihe ndị ọzọ na-eduga n'ebe ọwụwa anyanwụ nke ụgbọ elu nke ụgbọ ala.
Černý potokLysa Hora
Volta Voltage Eletrọniki Discharge Art Bipute
Ọnwa 6 gara aga
Ọnwa 7 gara aga